ဥာဏ်တွေပိုကောင်းလာတယ် – Hlataw.com
ဒီနေ့ ကျမစိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်မသိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ဒီလိုတွေဖြစ်နေလို့ ဒေါသထွက်နေမိတယ်။ ကိုယ့်သားအရွယ် ကိုယ့်တပည့်ကိုမှ စိတ်က ဒီလိုဖြစ်စရာလား၊ ကောင်လေးကြည့်ရတာသူ့ဆရာမဖြစ်နေတာတွေ ဘာမှသိပုံမရဘူး။ အပစ်ကင်းတဲ့ ကလေးမျက်နှာလေးနဲ့ ကျမမှာသာ လူကြီးတန်မဲ့ မကြံအပ်မစီရာတွေဖြစ်နေတာ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ သူ့ကိုဖိဆူနေတော့ သူ့ခမျာ မျက်လုံးလေးပေကလတ် ပေကလတ်နဲ့ ကျမကိုပြူးကြည့်နေရှာပါတယ်။ “ကဲ ငဇော်၊ ငါ့ကိုပြူးကြည့်မနေနဲ့ ပြန်တော့ နောက်နေ့မှဘဲ စာဆက်သင်တော့မယ်” အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ သူ့ခမျာ စာအုပ်တွေသိမ်းပြီး ထပြန်သွားလေရဲ့၊ ဒီနေ့အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်စရရင် ဟိုး အစကနေပြောမှဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ ကျမနာမည်က ဒေါ်ဝေဝေမာပါ၊အထက်တန်းပြဆရာမပါ။ နေတာကကျောင်းနဲ့ သိပ်မနီးမဝေးမှာပါ။ ကျမရဲ့ အမျိုးသားက ကိုမျိုးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကအခွန်ရုံးက ဦးစီးအရာရှိဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးက သုံး ယောက်ရှိပါတယ်။ သားအကြီးဆုံးက ရှစ် တန်း သားအလတ်က ခြောက်တန်းနဲ့ အငယ်ဆုံးသမီးလေးက လေး တန်းရောက်နေပါပြီ။
ပြောရရင် ကျမတို့မှာ အစစ အရာရာပြည့်စုံပြီး ဘာမှ လိုလေသေးမရှိပါဘူး။ကိုမျိုးကလည်း အသောက်အစား အပျော်အပါးကင်းပြီး မိသားစုကိုခင်သူပါ။ ကျမတို့လင်မယားက ငယ်ချစ်တွေပါ။ ဒီနေ့ထိ ကြီးကြီးမားမား ဘာပြသနာမှမရှိဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလာခဲ့တာ အိမ်ထောင်သက်ဘဲ တစ်ငါးနှစ်ရှိပါပြီ။ ကျမရော ကိုမျိုးပါ အသက် သုံးခြောက် နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျမတပည့်ဇော်ဇော်က ကျမအတန်းထဲက တစ်ဝ တန်းကျောင်းသားလေးပါ။ နေတာကလည်းကျမတို့နဲ့ တလမ်းထဲ၊ သူ့မိဘတွေကလည်း ပညာတတ် အစိုးရ အရာရှိတွေ၊ ကျမတို့နဲ့လည်း တော်တော်ရင်းနှီးကြပါတယ်။ ကျမကဇော်ဇော့်ကို အိမ်မှာ ကျူရှင်ပြပါတယ်။ ကျောင်းက မနက်ကျောင်းဆိုတော့ ကျောင်းကပြန်တာနဲ့ ဇော်ဇော်က စားသောက်ပြီး ရင် ကျမအိမ်ကိုလာရပြီးညနေ ငါးနာရီလောက်ထိ ကျမဆီမှာဘဲ စာသင်စာကျက်လုပ်ရပါတယ်။ ညနေ ကျမကလေး သုံး ယောက်ကျောင်းကပြန်လာတော့မှ စာသင်ရပ်ပြီး သူ အိမ်ပြန်ရပါ တယ်။ ဇော်ဇော် ကျမဆီမှာ စာသင်ခဲ့တာ ကိုး တန်းကတည်းကပါ။ အဲဒီတုံးက ကောင်လေးက သေးသေးညှက်ညှက်လေး ဒီနှစ်မှ အရပ် ထွက်လာပြီး မသိမသာကြီးကောင်ဝင်လာတာပါ။
ဒါပေမဲ့ မျက်နှာက ခုထိကလေးမျက်နှာလေးပါ။ ဖြစ်ပုံက ဒီနှစ်ထဲမှာမှ ဇော်ဇော်က အရပ်ရှည်လာသလို ကျန်တာတွေလည်းကြီးလိုက်လာတာက စတာပါဘဲ။ သူက အိမ်မှာဆိုအမြဲတန်း ဘောင်းဘီကွာတားပွပွတွေ ဝတ်တတ်ပါတယ်။ အတွင်းခံကလည်းမဝတ်တော့ သူ့ဘောင်းဘီထဲက ဟာက သိသိသာသာကို ထင်သာ မြင်သာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူကတော့ ကလေးဆိုတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘဲ ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်း မရှိတော့ပိုဆိုးတော့တာပေါ့။ တခါတခါမှာ စာသင် နေရင်းကို ဘောင်းဘီခြေပွထဲကနေ သူ့ဟာကို မြင်လိုက်ရရင် ရင်တွေပန်းတွေတုံတုံသွားရပါတယ်။ ဆိုးတာကကျမကိုယ်တိုင်က အဲဒါကို ဘဲ ကြည့်ချင်မြင်ချင်နေတာပါ။ စာသင်ပေးနေရင်းနဲ့ စာသင်တဲ့အထဲကို စိတ်မဝင်စားနိုင်ဘဲ စိတ်က သူ့ဟာဆီဘဲရောက်ရောက် နေပါတော့တယ်။ သူ့ဟာကလည်း လူကသာကလေး ပစ္စည်းက လူကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ လုံးပတ်ကတော်တော်တုတ်ပြီး သာမန်အချိန်မှာ တောင် မနဲမနောကြီးပါ။ ထများလာရင် မတွေးရဲအောင်ပါဘဲ။ ကျမတို့ လင်မယားလည်း အရင်ညားကာစတုံးကလို ရက်ဆက် မဆက်ဆံ ကြတော့ပေမဲ့။
တစ်လ လေး..ငါးခါတော့ အလုပ်ဖြစ်ကြပါသေး တယ် အလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာလည်း စိတ်တိုင်းကျခဲ့ရပြီး ကျေကျေနပ်နပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကလေး သုံး ယောက်ရပြီဆိုတော့လည်းဒီကိစ္စက သိပ်ကြီး အရေးမပါတော့သလိုပါဘဲ။ ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းမှတ်မိသလောက် သိပ် ထ တဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း ခုဒီလို ဖြစ်နေတော့ ကျမကို ကျမ ဒေါသထွက်နေရတာပါ။ တခါတခါများဘယ်လောက်ထိဆိုးလာသလဲဆို စာသင်နေရင်းနဲ့ သူ့ဟာကိုကြည့် ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့လို့ အိပ်ခန်းထဲဝင် တံခါးပိတ်ပြီး လက်နဲ့အာသာဖြေလိုက်ရပါတယ်။ ပြောရရင် ဒီ့အရင်က ကျမ တခါမှ ကိုယ့် ဖာသာကိုယ် လက်နဲ့တခါမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ ကျမဒုက္ခနဲ့ကျမ လုံးဝမနေနိုင်တော့ ဘာကြီး ဘဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကိုအတင်းအခန်းထဲဆွဲသွင်း ပြီး ဆက်ဆံပစ်လိုက်ချင်စိတ်ပေါက်တာကလည်း အခါခါပါဘဲ။ ညညမှာ တရားထိုင်ပြီးဒီစိတ် တွေ ဖျောက်ဘို့ကြိုးစားပေမဲ့ အချည်းနှည်း ပါဘဲ၊ ခုဆိုပိုတောင်ဆိုးဆိုးလာပါတယ်။ သူအိမ်ရောက်လာမဲ့အချိန်ကိုဘဲ မျှော်နေမိပါတော့ တယ်။ ကျနော့နာမည် ဇော်ဇော်ပါ ဆယ်တန်းရောက်ပါပြီ။
ဆရာမ ဒေါ်ဝေဝေမာက ကျနော်တို့အတန်းက အတန်းပိုင်ပါ။ နေတာကလည်း တလမ်းထည်းဆိုတော့ ကျနော်က ကျောင်းကပြန်ရင် သူ့ဆီမှာ ကျူရှင်ဆက်တက်ရပါတယ်။ ကိုး တန်းကတည်းက ဆရာမဆီမှာ ကျူရှင် တက်နေခဲ့တာပါ။ ကိုး တန်းတုံးကတော့ သိပ်လည်းဘာမှမသိသေးတော့ ကျနော့စိတ်တွေက ပုံမှန်ပါဘဲ။ ကျနော့စိတ်တွေစ ဖေါက်ပြန် လာတာက တစ်ဝ တန်းရောက်မှပါ။ ကျောင်းက အကိုကြီးတွေသင်ပေးလို့လည်း ဂွင်းထုတတ်နေပါပြီ။ သူတို့ပြောလို့လည်း ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စ တွေ တော်တော်သိနေပါပြီ။ အကိုကြီးတွေပြောတာကတော့ ကျနော့ဟာကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်လို့ ဆိုတာဘဲ။ တခါကဆို သူတို့ ဖုန်း ထဲမှာပြလို့ မိန်းမနဲ့ ယောင်္ကျား လုပ်ကြတာတွေလည်းမြင်ဘူးနေပါပြီ။ မိန်းမတွေရဲ့ဟာတွေလည်း ဖုန်း ထဲမှာ အမျိုးစုံ မြင်ဘူး ထား ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက ကျနော့ဆရာမနဲ့ပါ။ သူကအိမ်မှာနေရင်တော်တော်အနေပက်စက်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း သူ့သား အရွယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက အမြဲဒီလိုဘဲ နေလာကြတော့ရိုးနေတာလည်းပါမှာပေါ့။
ကျနော်ကသာ အရင်က ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ ဒီနှစ်ကျမှဘဲ စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်လာတာလေ။ ဆရာမက အိမ်မှာဆို အတွင်းခံ ဘရာစီယာ ဘယ်တော့မှ မဝတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အင်္ကျီဆိုလည်း၊ စပန့်သား လက်ပြတ်တို့၊ စွတ်ကျယ်သားဂျိုင်းပြတ်အကျီတို့ အမြဲဝတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့နို့ကတော့ ကျနော့အတွက် မမြင်ချင်အဆုံးပါဘဲ။ နောက်ပြီး ဆရာမက ကိုယ်လုံးတော်တော်လှတယ်၊ ကလေး သုံး ယောက်မွေးထားပေမဲ့ ပုံမပျက်သေးဘူး။ ဗိုက် လည်းသိပ်မပူဘူး။ တင်ပါးဆို လုံးကားပြီး တော်တော်ကြီးပါတယ်။နို့ကလည်း အရမ်းမကြီးပေမဲ့ သေးလည်းမသေးပါဘူး။ ကျနော့မျက် စေ့ထဲမှာတော့ တော်တော်လှပါတယ်။ ဆရာမက အသားက ဖြူဖွေးနေပြီး တခါသူ့အကျီ လည်ဟိုက်ထဲက လှမ်းမြင်လိုက်ရတာ သူ့နို့သီး ခေါင်းတွေကလည်း နီရဲနေပါတယ်။ ကျနော့မှာ ဆရာမကိုကြည့်ကြည့်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ အိမ်သာထဲမှာ မှန်းမှန်းပြီး ဂွင်းထုထုနေ ရတာ ငရဲ ငအုံတွေလည်းတော်တော်ကြီးနေပြီထင်ပါတယ်။ ညအိပ်တဲ့အခါလည်း ဆရာမ ဖင်ကြီးနဲ့ နို့ကြီးကိုဘဲမြင်ယောင်ပြီး ဂွင်းဘဲ မကြာမကြာထုထုဖြစ်နေပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းဆို ဆရာမကိုမြင်တိုင်း ဖုန်း ထဲမှာ မြင်ဘူးသလိုမျိုး လိုးဘဲလိုးချင်နေပါတယ်။ စိတ်ကူး ထဲမှာလိုးနေတာလည်း အကြိမ်ပေါင်းမနဲတော့ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျနော့ဟာကြီးကို ဆရာမကိုပြချင်စိတ်ပေါက်လာပါတယ်။ အဲဒါ နဲ့ဘဲ မသိမသာဆရာမရှေ့မှာ စာသင်နေရင်းနဲ့ ကျနော့ဘောင်းဘီထဲကဟာကြီးကို ဆရာမ မြင်အောင် မသိမသာ ဆရာမဘက် လှည့်ပြီး အောက်စ လွှတ်လွှတ် ပြထားပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်နှာမှာတော့ ဘာမှ မသိတဲ့ပုံစံ ဟန်ဆောင်ရတာပေါ့။ ဆရာမလည်း ကျနော့ဟာကြီး ကို မြင်ပုံရပါတယ်။ အစမှာတော့ ခတ်လန့်လန့်ပါဘဲ၊ ဘယ်အချိန်များ ထ ကောပြီး နားရင်းတီးခံရမလဲ ကြောက်နေတာ ပါ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ က ဘာမှမပြောဘဲ ခိုးခိုးကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ကျနော်လည်း ပိုအကြိုက်တွေ့ပြီး သူမမြင်ခင်မှာ ကျနော့ဟာ ကြီး အသက် ဝင်လာအောင်ဆွဆွပေးထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမြင်လိုက်ရရင် ဆရာမမှာ စာသင်တာ တွေ မှားလိုမှား ရေတွေ တစွတ် စွတ် သောက်နဲ့ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့မျက်နှာလည်း နီရဲလာတတ်ပါတယ်။
တခါဆို မျက်နှာကြီးနီပြီး သုတ်ကနဲ ထပြီး သူ့အခန်း ထဲ ဝင်သွားပြီး တံခါးပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘာမှန်းမသိတော့ ဒီအတိုင်းငြိမ်ပြီးပေးထားတဲ့ သင်္ချာ ပုစ္စာ တွေကို ဆက် တွက် နေလိုက်ပါတယ်။ တော်တော်လေးကြာတော့မှအခန်းထဲကထွက်လာပြီး နောက်ဖေးဘက်ဝင်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ မျက်နှာတွေ ဘာတွေ သစ်ပြီးပြန်ထွက်လာပြီး ဟန်မပျက် စာဆက်သင်ပါတယ်။ထူးတော့တော်တော်ထူးဆန်းနေပါတယ်။ နောက်တနေ့မှာလည်း အဲဒီ လိုတခါ ထပ်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ကျနော်လည်းသိချင်တာနဲ့ အသာလေးထပြီး အခန်းတံခါးဝက အသာကပ်ပြီး နားထောင်လိုက် တော့ အထဲမှာ တအင်းအင်း တအားအားနဲ့ ညည်းသံလိုလိုကြားရပါတယ်။ ကျနော်လည်း ခဏနားထောင်လိုက်ပြီး ကိုယ့်နေရာကိုယ် အသာ ပြန်ထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ ခဏကြာတော့ ဟိုနေ့ကလိုဘဲ ပြန်ထွက်လာပြီး စာဆက်သင်ပါတယ်။ ကြည့်ရတာတော့ ဆရာမလည်း ကျနော့ဟာမြင်ပြီး ဖီလင်တွေတက်လာလို့ ကျနော်တို့လုပ်သလို ဂွင်းဝင်ထုတယ်ထင်တာဘဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သလဲတော့မသိဘူး၊ ကျနော်ကြည့်ဘူးတဲ့ ကားတွေထဲကလို လက်နဲ့ လုပ်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
အခန်းထဲကပြန်ထွက်လာပြီးတဲနောက်ဆို ဆရာမက ကြည်ကြည်လင်လင် ပျော်ပျာ်ရွင်နဲ့ စာဆက်သင်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နောက်နေ့တွေမှာ ဆရာမကိုယ်တိုင်က ကျနော်သူ့ကိုယ် လုံးကို ကြည့်စေချင်တဲ့ပုံစံပြလာပါတယ်။ စပန့်သားဘောင်းဘီ အတိုနဲ့စွတ်ကျယ်ဂျိုင်းပြတ်တွေ ဝတ်လာတတ်တော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က မမြင်ချင်အဆုံးဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ ကျနော့အရှေ့မှာ မကြာမကြာ သူ့လယ်ဟိုက်ထဲက နို့ကြီးကို မမြင်မြင်အောင်ပြတတ်ပါတယ်။ တခါတခါဆိုရင် ထမီဝတ်ပြီး အောက်စလွှတ်ပြထားပါတယ်။ မှောင်နေတော့ ပေါင်းတွင်းသားလောက်ဘဲမြင်ရပြီး အထဲထိတော့ မမြင် ရပါဘူး။ ကြည့်ရတာ ဆရာမက တမင်ကိုလုပ်ပြနေသလိုပါဘဲ။ အစတုံးကတော့ ကျနော်က မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တော့ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး ပေါ်တင်ဘဲ ကြည့်လိုက်တာပါဘဲ။ ဆရာမကလည်း ဒါကို သိသိကြီးနဲ့ကို ဘာမှမပြောဘဲနေပါတယ်။ ကျနော်က လည်းခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျနော့ဟာကြီးကို ဆရာမ ကောင်းကောင်းမြင်ရအောင်ကို တမင်ပြပြထားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမက ကျနော့ဟာ ကြီးကြည့်ပြီးဖီလင် တက်လာလို့ အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားပြီး ဂွင်းထုနေတဲ့အချိန်မှာ။
ကျနော်ကလည်း သူ့အခန်းဝမှာ သူ့အသံနားထောင်ပြီး မတ်တတ် ဂွင်းထု ထုနေတတ်ပါပြီ။ သူပြန်မထွက်လာခင် ကျနော့စားပွဲအရောက်တော့ပြန်ရတာပေါ့။ တနေ့မှာတော့ ဆရာမက သူ့အခန်း ထဲ ဝင်သွားပြီး ခဏနေတော့ ကျနောထလိုက်သွားတော့ ကျနော်ထီပေါက်ကိန်းဆိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီနေ့က ဆရာမ တံခါး မပိတ်မိဘဲ ဖြစ်သွားပြီး တံခါးက နဲနဲလေးတောင်ဟနေပါတယ်။ ကျနော်လည်း တံခါးအဟထဲက အထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့ လား လား ဆရာမဟာ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်ကြီးကိုထောင်ဖြဲထားပြီး သူ့လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းက သူ့ဟာကြီး ထဲကို ထိုးထည့်ထားပြီး ခတ်သွက်သွက်ကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေပါတယ်။ သူ့ဖင်ကြီးက အခန်းတံခါးဝဖက် ခပ်စောင်းစောင်း လေး လှည့်ထားတော့ ကျနော့မှာ သူ့ဟာကြီးနဲ့ သူလုပ်နေတာတွေကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုမြင်နေရပါတော့တယ်။ဆရာမရဲ့ ဟာကြီး က ဖေါင်းကားနေပြီး ဆီးခုံပေါ်မှာ အမွှေးမဲမဲတွေနဲ့ဖုံးနေပေမဲ့ အောက်ပိုင်းမှာတော့ အမွှေးမရှိဘဲ ပြောင်ပြီး ဖွေးစွတ်နေပါတယ်။ သူ့နို့နှစ်လုံး ကလည်း သူလုပ်နေတဲ့ အရှိန်နဲ့ သွက်သွက်ခါနေပါတယ်။
သူ့လက်ချောင်းတွေ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဟာကြီးက အတွင်း သားတွေနီရဲနေပါတယ်။သူ့လက်တွေဟာလည်း အရည်တွေနဲ့ ရွှဲရွှဲ စိုနေပါတယ်။ ကျနော့မှာ ကြည့်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ပြီး ဂွင်းထု လိုက်တာ လေး…ငါးချက်လောက်ဘဲထုလိုက်ရတယ် လရည်တွေ ပန်းထွက်ပြီး ပြီးသွားပါတော့ တယ်။ ကျနော်ပြီးသွားပေမဲ့ ဆရာမ က လုပ်ကောင်းတုန်းပါ၊ ကျနော်လည်း နေရာကိုမပြန်တော့ဘဲ ဆရာမကိုဘဲ ကြည့် ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမ က ခဏနေတော့မှ သူ့ဟာကိုသူ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ အသားကုန်ဆောင့် ဆောင့်ထိုး ရင်း သူ့ဖင်ကြီးက လည်းတပေလောက် မြောက်ကြွ မြောက်ကြွဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ကလည်း အီး၊ အီး၊ အီး၊ နဲ့ ရင်ခေါင်းသံကြီးထွက်ပြီး ငြိမ်ကျသွား ပါတော့ တယ်။ အဲဒီတော့မှဘဲ ကျနော်လည်း ကိုယ့်နေရာကို ကိုယ်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီနေ့မြင်ကွင်းကလည်း ကျနော့ဦးဏှောက်ထဲ မှာ တသက်စာ ဆွဲသွားပါ တော့တယ်။ အဲဒိနေ့ကစလို့ နောက်နေ့တွေမှာ ဆရာမ တံခါးပိတ်ဘို့နေ့တိုင်းမေ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်း နေ့တိုင်း ပွဲတော်ကြီးနဲ့တိုးနေ ရတော့တာပေါ့။
ကျမလည်း စိတ်ကိုထိမ်းဘို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဘဲ ပိုပိုဆိုးလာတာနဲ့ လွတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေ့တိုင်းလိုလို ဇော်ဇော့်ဟာကြီး ကြည့်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ဘဲ အာသာဖြေနေလိုက်တော့ နဲနဲနေသာထိုင်သာရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါသိပ်ကြာကြာမခံပါဘူး။ ကျမစိတ်ထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့နောက်စိတ်ရိုင်းတမျိုး ထပ်ဝင်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူ့ကိုလည်းကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းပိုင်းတွေကို ပြချင်စိတ်ပေါက်လာတာပါဘဲ။ ဒီတခါတော့ ကျမလည်း ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်မခံတော့ဘဲ သူ့ကိုပြဘို့လုပ်ငန်းစလိုက်ပါတော့တယ်။ အစ ပထမမှာတော့ ဘောင်းဘီပျော့ပျော့တိုတိုလေးတွေဝတ်တာတို့ စွတ်ကျယ်ဂျိုင်းပြတ် လည်ပွတွေ ဝတ်ပြီး သူ့ရှေ့မှာ သူမမြင် မြင်အောင် ကုန်းပြတာတို့စလုပ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ထမီဝတ်ပြီး အောက်စလွှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း ကျမခင်းတဲ့လမ်းကို လိုက်လျှောက်ပြီး ကျမနို့ကို ချောင်းချောင်းကြည့်တာတို့ ကျမ ဖင်ကြီးကို ခိုးကြည့်တာတို့ စလုပ်လာပါတယ်။ ယုတ်မာလိုက်တဲ့ကျမက အဲဒါကိုဘဲ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းပျော်နေမိပါတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဇော်ဇော်လည်း ကျမ ကိုယ်ခန္ဓာ ကို အရသာတွေ့လာပုံရပါတယ်။
ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေပြောင်းလာပြီး တခါတခါများ ကျမ ကြည့်နေ တာတောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ပြန်ကြည့်နေတတ်လာပါတယ်။ သူ့ဟာကလည်း အရင်ထက်ကို ပိုပိုပြီးလွယ်လွယ်မြင်နိုင်လာပါတယ်။ ကျမ အခန်းထဲဝင်ဝင်ပြီး အာသာဖြေနေတဲ့အချိန်မှာ ဇော်ဇော် အခန်းဝရောက်ရောက်လာပြီး အထဲက ကျမ အသံကို ခိုးနားထောင်နေတတ် တာကိုလည်း အခန်းတံခါးက သစ်သားလေးနဲနဲဟနေလို့ သူ့အရိပ်ကိုကျမမြင်နေရပြီးသိနေပါတယ်။ သူကတော့ကျမ သိနေမှန်း မသိပါ ဘူး။ ကျမ ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ သူ့နေရာသူပြန်ပြီး စာလုပ်ချင် ယောင်ဆောင်နေတတ်ပါတယ်။ ကျမက သူ ခိုးနားထောင်နေတာသိလို့ အသံမျိုးစုံ ပိုပြီး ထွက်ပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဇော်ဇော် ဟာ ကျမ အခန်းရှေ့မှာ ဂွင်းထုထုနေပုံရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီ နေရာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ သူ့လရည်တွေကိုတွေ့လာရလို့ ပါဘဲ။ ကျမ သူ့ကို ဒီလောက်ပြရုံနဲ့ အားမရနိုင်တော့လို့ တဆင့်ထပ်တက်လိုက်ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ ကျမ အခန်းထဲ ဝင်တဲ့အချိန် တံခါးကို မပိတ်တော့ဘဲ နဲနဲလေးဟ ထားလိုက်ပြီးကျမလုပ်နေကျအတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး လက်နဲ့ အာသာဖြေတဲ့အလုပ်ကို စလုပ်ပါတယ်။
ထင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ ခဏ လောက်ကြာတော့ ဇော်ဇော်ဟာ အခန်းဝကိုရောက်လာပါတယ်။ အခန်းတံခါးဟထားတော့ အဲဒီတံခါးကြားကနေ ရပ်ပြီးကြည့်နေ တာ ကိုမြင်နေရပါတယ်။သူကြည့်နေတာကို ကျမ သိနေလေ ကျမမှာ ပိုအရသာတွေ့လေ ဖြစ်နေ ပြီး အဲဒီနေ့က ကျမ လက်နဲ့ကျမအသားကုန် ကို စောင့်စောင့်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နေ့တွေဆိုရင် ဖြေးဖြေး အရသာခံလုပ်ခဲ့ ပေမဲ့ အဲဒီနေ့ကတော့ မီးကုန် ရမ်းကုန်ကို လုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇော်ဇော်ကိုယ်တိုင်လည်း မတ်တတ် ဂွင်းထုနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ကျမ အားလုံးပြီးသွားလို့ ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ အခန်းဝမှာ သူ့လရည်တွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ သူလည်း တော်တော် ဖီလင်တွေ့သွားပုံပါဘဲ။ မဖြစ်ဘဲနေပါ့ မလား၊ ကိုယ့်အရှေ့မှာ ကိုယ့်ဆရာမက ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ခုလိုလုပ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့ ဘယ် တပည့်က နေနိုင်မှာလည်း။ ကျမမှာလည်း နေ့တိုင်း သူ့လရည်သုတ်ရတဲ့ အလုပ်တခုတိုးလာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝလေး အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်နဲ့ မကြေနပ်နိုင်သူက ကျမပါဘဲ။
ကျမမှာ အခု နောက်ထပ်အသစ်ပေါ်လာ တဲ့ဆန္ဒက ကျမတပည့်လေးနဲ့ ဆက်ဆံချင်နေတာပါဘဲ။ ဇော်ဇော်ကတော့ ကလေးလည်းဖြစ် သူ့ဆရာမလည်းဆရာမဆိုတော့ သူ့စိတ် ထဲဖြစ်နေတာ ဘယ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရဲပါ့မလည်း။ ဒီတော့လဲ ကျမကဘဲ ကိုယ်လိုချင်တာ ကိုယ်ဖန်တီးရတော့မှာပေါ့။ ကျမက ကလေး သုံး ယောက်မွေးပြီး သားကြောဖြတ်ထားတော့ ဗိုက်ကြီးလာမှာလည်းမပူရဘူးလေ။ ကျမတို့နှစ်ယောက်အချေအနေကလည်း တယောက်ဖြစ်နေတာတွေ တယောက်က သိနေပြီး ထုတ်မပြောတာဘဲရှိပါတယ်။ ခုအချိန်မှာ သူ့ကို လာစမ်းဆိုပြီး အကုန်ဆွဲချွတ်ပြီး တက်လုပ်ရင်တောင်ရနေပါပြီ။ အဲဒီလိုကြီးလည်းမလုပ်ချင်လို့ ဘယ်လိုအစပျိုးရမလည်းဆိုတာ စဉ်းစားနေတာပါ။ ဒါနဲ့ တနေ့တော့ သူ့ကိုစာသင်နေတုံး ကျမကပေါ်တင်ဘဲမေးလိုက်ပါတယ်။ “ဇော်ဇော်၊ ဆရာမကို နင် နေ့တိုင်းချောင်းချောင်းကြည့်နေတယ်မို့လား။” ဇော်ဇော်က ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ခေါင်းကိုငုံ့ထားပါတယ်။ သူဘာပြန်ပြောရမလဲ စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်။ ကျမကဘဲဆက်ပြီး “ရှက်မနေနဲ့သား ဆရာမက သားကြည့်စေချင်လို့ တမင် တံခါးဖွင့်ထားတာ၊ သား ကြည့်ချင်တယ်မို့လား”။
အဲဒီတော့မှ ကိုယ်တော်က ကျမကိုမော့ကြည့်ပြီး ခေါင်းတချက်ငြိမ့်ပြပါတယ်။ “လာ သား အခန်းထဲလိုက်ခဲ့” ကျမက ဇော်ဇော့်လက်ကို အသာဆွဲပြီး အခန်းထဲကို ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကျမ အကျီကို ခေါင်းပေါ်မ ချွတ်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထမီကိုလည်း အောက်ပုံချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဇော်ဇော်က ကျမလုပ်တာတွေကို တွေတွေကြီးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးက ကျမ အဖုတ်ပေါ်ကနေ လုံးဝမခွာတော့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမမှာ ရှက်တဲ့စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်နေသလည်း မပြော တတ်တော့ပါဘူး။ ကျမအဖုတ်ကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်လုံး တွေကိုဘဲကြည့်ပြီး ကျေနပ်နေမိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကျော်ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ကျမလုပ်သမျှငြိမ် ခံနေပါတယ်။ ကျမကဆက်ပြီး သူ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ချလိုက် ပါတယ်။ အရင်က ဘောင်းဘီကြားကနေ မထင်မရှားမြင်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ဟာ ကြီးကို အခုတော့သေသေချာချာကိုမြင်နေရပါပြီ။ ကောင်လေး က အသက်သာငယ်တာ သူ့ပစ္စည်းကတော့ စံချိန်မီပါဘဲ။ အင်းပေါ့လေ၊ အရပ်က ကျမထက်တောင်ရှေနေပြီဆိုတော့ ပစ္စည်း ကလည်း အရွယ်ရောက်နေပြီပေါ့။
သူဟာကြီးက တော်တော်ကြီးပါတယ်။ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်တောင်မနေတာတောင်မှ လုံးပတ်က တော်တော် တုတ်ပါတယ်။ တောင်လာရင် ကိုမျိုးဟာထက်တော့ သေးမယ် မထင်ပါဘူး။ ကျမက သူ့ရှေ့မှာ ငုတ်တုတ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ့ ဟာကြီးကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျမလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဟာက ချက်ချင်း အသက်ဝင်လာပါတယ်။ ခုနက နဲနဲ ပျော့တော့ တော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာက ချက်ချင်းကို မာတင်းလာပါတယ်။ ကျမလည်း လက်နဲ့ဖွဖွလေးဆုပ်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဖြေးဖြေးလေး ဂွင်းထု ပေးနေလိုက်တော့ သူ့မှာ ခါးကိုကော့ကော့ပေးလာပါတယ်။ သူ့ပစ္စည်းကလည်း ကျမ လက်တဆုပ်အပြင်ကို နောက်ထပ် နှစ် လက္မ လောက် ပိုရှေထွက်နေပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ကိုမျိုးတို့လို အရေဖျားနဲ့ဖုံးမနေဘဲ သူ့ဒစ်ကပြုတ်နေပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ငယ်ငယ် ကတည်းက အရေဖျားလှီးထားသလိုပါဘဲ။ ကျမကသူ့ထိပ်ဖျားကို ကျမပါးစပ်ထဲ ငုံလိုက်ပြီးပါးစပ်ထဲမှာတင် လျှာနဲ့မွှေ့ပြီး ကလိ ပေးနေ လိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ တကိုယ်လုံးကော့ထိုးပြီး နိဗ္ဗါန်ရောက်နေပုံပါဘဲ။
သိပ်တောင်မကြာလိုက်ပါဘူး ဇော်ဇော်တယောက် ကော့ထိုး ကော့ထိုး ဖြစ် လာပြီး တအီးအီးနဲ့ သူ့ဟာကြီးထဲက လရည်တွေ ကျမပါးစပ်ထဲကိုပန်းထွက်လာပါတော့တယ်။ ကျမလည်း သူ့လရည်တွေကို အကုန် မြို ချပစ်လိုက် ပါတယ်။ ဇော်ဇော်က ကျမကိုအားနာသလိုမျိုး မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ ကြည့်လာပြီး “အား၊ ဆရာမ၊ ကန်တော့နော်၊ ကန်တော့” “ဟင်း၊ ဟင်း၊ ကန်တော့စရာမလိုပါဘူးကွယ်၊ မင်းလရည်တွေကို ဆရာမက သောက်ချင်နေတာကြာပြီကွ” ဇော်ဇော့်ရဲ့ဟာကြီးက ကျမလက်ထဲမှာ ပျော့စိပျော့ဖတ်လေးဖြစ်လာတော့မှ ကျမက လွှတ်လိုက်ပြီး “ကဲ၊ သားက ဒီတခါ ဆရာမဟာကို သေသေချာချာလေ့လာနော်” ဆိုပြီးကျမ ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ “ဇော်ဇော်” ကျနော်လည်းဆရာမပြောသလိုဘဲ ဆရာမရဲ့ ဟာကြီးကို ထိုင်ပြီးသေသေချာချာလေ့လာလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးက ဖေါင်းဖေါင်းကြီးနဲ့ ခြေထောက်ကို အောက်ချထားတော့ အကွဲကြောင်းကလေးတကြောင်းဘဲမြင်ရပါတယ်။ စောက်ဖုတ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်း မှာတော့ အမွှေးက မဲနက်နေပြီးတော်တော်ထူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အောက်ပိုင်း အကွဲကြောင်းတလျောက်မှာတော့ ဘာအမွှေးမှမရှိဘဲ ပြောင်ရှင်းနေပါတယ်။ ဆရာမက “သား၊ ဒီအတိုင်းကြည့်မနေနဲ့ ကိုင်ကြည့်ဦးလေ။” ကျနော်က ဆရာမပြောသလို သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်နဲ့ အသာလေးတို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ စောက်ဖုတ်က နုအိနေပါ တယ်။ ကျနော်က သူ့စောက်မွှေးတွေပေါ်ကိူ လက်တင်လိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးလေး ပွတ်ပေးနေလိုက်တော့ ဆရာမက ငြိမ်ခံနေပါတယ်။ သူ့စောက် မွှေးတွေက မဲနက်ပြီးထူနေပေမဲ့ ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ကြမ်းမနေဘဲ နုနုလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကိုင်လို့ကောင်း ကောင်းနဲ့ ဆက်ပြီးပွတ်ပေးနေလိုက်ပြီး တခါတခါမှာ အောက်ပိုင်းက အကွဲကြောင်းပေါ်ကိုလည်း ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမက “သား ခုလိုမျိုး မိန်းမ ဟာတွေမြင်ဘူးလား” “အပြာကား ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့တွေ့ဘူးတယ်” “သြော်၊ မင်းက အပြာကားတွေ ဘာတွေလည်း ကြည့်ဘူးပြီပေါ့၊ ဟုတ်လား၊ ဆရာမက ဘာမှမသိတဲ့ကလေးလေးမှတ်နေတာ” “ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ခုမှ မြင်ဘူးတာ၊” ဆရာမက စကားတပြောပြောနဲ့ သူ့ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကုတင်ပေါ်ထောင်တင်လိုက်ပြီး နဲနဲကားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့မှ ဆရာမရဲ့ အဖုတ်က နဲနဲလေးဟလာပြီး သူ့အကွဲကြောင်းထိပ်မှာ အစေ့သေးသေးလေးကို မြင်လာရပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီ အစေ့လေး ကို လက်ညှိုးနဲ့ တို့ကြည့်လိုက်တော့ ဆရာမ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆရာမရဲ့စောက်စေ့ထိပ်ကလေးကလဲ နီရဲတွတ်နေပါတယ်။ ပေါင်ကိုထောင်ပြီးဖြဲထားတော့စောက်ဖုတ် အပြားကြီးကလည်း အကြီးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အကွဲကြောင်းက ခုနလိုစိမနေတော့ဘဲ ဟနေ တော့ နီရဲနေတဲ့ အတွင်းသားတွေကိုမြင်နေရပါတယ်။ အဲဒီအတွင်းသားလေးတွေက အရည်စိုစိုနဲ့ အရောင်လက်နေပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီကြားထဲလက်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဆရာမက အင်းကနဲ အသံရှည်ကြီးနဲ့ ညည်းလိုက်ပြီး သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းလုံးကို သူ့လက် နှစ်ဘက်နဲ့ ဒူးခေါက်ခွက်ကနေ ဆွဲဖြဲထားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမက ကြိုက်ပုံရတာနဲ့ ကျနော့လည်း လက်ကို ဆရာမရဲ့ အဖုတ်ကြားထဲ ထည့်ပြီး အပေါ်အောက်ဆွဲဆွဲပြိး ပွတ်ပေးနေလိုက်တော့ ဆရာမမှာသူ့တင်ပါးကို ဖြေးဖြေး လေး မြောက်ကြွမြောက်ကြွ လှုပ်ပေးနေပြီး ကောင်းလိုက်တာ သားရယ်၊ ဆက်လုပ်၊ ဆက်လုပ် အဲ့လိုလေးဆက်လုပ်ပေးနေနော် အား… ရှီး… ကောင်းလိုက်တာ။
ကျနော်က နောက်လက်တဘက်နဲ့ သူ့စောက်စေ့လေးကိုပါ ဖွဖွလေးထပ်ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ဆရာမ ဖင်ကြီး ထွန့်ထွန့်လူးလာပြီး “အမလေး၊ သားရေ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်း၊ အူး….ကောင်းလိုက်တာ၊အမလေး၊ အမလေး၊ အမလေး၊ လုပ်ပါ၊လုပ်ပါ၊ နာနာလေး ပွတ်ပေးပါ၊ အား…….ကောင်းတယ်၊ အရမ်းကောင်းလွန်လို့ပါ၊ မရပ်လိုက်နဲ့နော်၊” ဆရာမ ပါးစပ်က တရစပ်အော်နေသလို သူ့ဖင်ကြီးကလည်း တအားကို ထွန့်ထွန့်လူးနေပါတော့တယ်။ ကျနော်လည်း သူအော်လေ ပိုအားစိုက်လုပ်လေနဲ့ တော်တော်လေးကြာလာတော့ ဆရာမ တကိုယ်လုံး ကုတင်ပေါ်ကနေ ကြွကြွတက်လာလိုက် ဝုန်းကနဲပြန်ကျလိုက် နဲ့ ဖြစ်လာပြီး ခနလေးနေတော့ ကျနော့လက်ကို အတင်းတွန်းထုတ်ပြီး သူ့ဒူးနှစ်ချောင်းကို ဆွဲစေ့လိုက်ပြီး ဘေးတိုက်ကွေးကွေးလေးလှဲ အိပ်နေလိုက်ပါတယ်။ အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေပြီး သူ့တကိုယ်လုံးကလည်း တခါတခါ ဆပ်ကနဲဆပ်ကနဲ တုံတုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူဖြစ်နေတာ ကို ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါတော့တယ်။ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့မှဆရာမအသက် ရှူသံမှန်လာပြီး ကျနော့်ကို ကုတင်ပေါ်လှမ်းခေါ်ပါတယ်။
ကျနော်က ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်တော့ ကျနော့ကိုဖက်ပြီး သူဆက်အိပ်နေပါ တယ်။ကျနော်က သူ့အဖုတ်မွှေးတွေကြားကျနော့လက်နဲ့ဆော့ကစားနေလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမက “သားဇော်၊ မင်းလုပ်ပေးတာကောင်းလိုက်တာ.. ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ကလေးရယ်၊” လို့ပြောပြီးကျနော့ကိုနမ်းပါတယ်။ ကျနော့ပါးတွေကို အရင်နမ်းပြီး နောက်တော့ ကျနော့ နှုတ်ခမ်းကို အကြာကြီး စုပ်ပြီးနမ်းပါတယ်။ ဆရာမ နမ်းတာ တော်တော်ခံလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ နမ်းနေရင်း သူ့လျှာက ကျနော့ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာပြီး ကျနော့လျှာကို ကလိပါ တယ်။ ကျနော်လည်း အားကျမခံ ဆရာမလုပ်သလို ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဆရာမက အရမ်းသဘောတွေကျသွားပြီး၊ “အင်း ဆရာမ တပည့်က တော်တော်တတ်လွယ်တာဘဲ၊ သင်တောင်မသင်ရသေးဘူး ဆရာဖြစ်နေပြီ” “ဆရာမ နမ်းသလိုနမ်းရတာကောင်းတယ် ဆရာမရဲ့” ဆရာမက နမ်းနေရင်းနဲ့ ကျနော့ လီးကို သူ့လက်နဲ့ စုပ်ပြီး တခါဂွင်းဖြေးဖြေးလေး ထုပေးနေပြန်ပါတယ်။ ကျနော့လီးကလည်း ဒင်ပြည့် ကျပ်ပြည့် ပြန်တောင်နေပြန်ပါပြီ။ဒီတခါတော့ ဆရာမက နမ်းတာရပ်လိုက်ပြီး “လာသား၊ တို့တွေ နောက်တမျိုးလုပ်ရအောင်”။
ဆရာမက ကျနော့ကိုပက်လက်ကလေးဆွဲလှဲလိုက်ပြီး ကျနော့လီးကို နဲနဲထပ်စုပ်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ တတွေးရွှဲရွှဲ နဲ့ကျနော့လီးကို စုပ်ထားပြီး ဆရာမက ကျနော့အပေါ်ကိုခွလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျနော့လီးနဲ့သူစောက်ဖုတ်ဝကို တေ့လိုက်ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမစောက်ဖုတ်က အရည်တွေရွှဲနေတာကတကြောင်း ကျနော့လီးကို တံတွေးသုတ်ထားလို့ကတကြောင်း ကျနော့လီးဟာ ဆရာမ စောက်ဖုတ်ထဲကို လျောလျောရှူရှူ ဘဲဝင်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပါတော့တယ်။ ဆရာမအဖုတ်ကြီးနဲ့ အဲ့လို လုပ်ပေးနေတဲ့ အရသာကကောင်းလိုက်တာ ကျနော့လီး ကို ဆရာမအဖုတ်က ပီပီပြင် ငုံထားပြီး စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့တော်တော်ကို အရသာရှိလှပါတယ်။ အစမှာတော့ မှန်မှန်ကလေး ထိုင်ထ လုပ်နေရင်း သွင်းထုတ်လုပ်နေရာက ခန နေတော့ အရှိန်မြန်လာပါတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း အီး.အား အီး.အား နဲ့အသံတွေထွက်လာပါတယ်။ နောက်တော့ ကျနော့ ပုခုံးပေါ် လက်လှမ်းထောက်ပြီး ကုံးကုံးကြီး သူ့အဖုတ်နဲ့ ကျနော့လီးကို အသားကုန်ဆောင့်ပါတော့တယ်။
အသားအသားချင်းရိုက်တဲ့ အသံတွေ ကလည်း တဖျောင်းဖျောင်း ဆရာမ အော်သံကလည်း တအားအားနဲ့ သံစုံမြည်နေပါတော့တယ်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး ကျနော့လီး တချောင်းလုံးတွင်မက ကျနော့ တကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေထပြီး ကျနော့လရည်တွေ ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရ ဆရာမ အဖုတ် ထဲကို ပန်းထွက် သွားပါတော့တယ်။ ကျနော်အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဆရာမက အရသာတွေ့ နေတုံးပါ။ မီးကုန်ရမ်းကုန် ဆောင့်နေတုန်း ကျနော်က ပြီးသွားပြီးလီးကပျော့သွားတော့ ဆရာမမှာ အားမလိုအားမရဖြစ်သွားပုံရပါတယ်။ ကျနော် နားနေတုံးမှာ ဆရာမက ကျနော့ကိုဖက်ပြီး တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သတ်ပေးနေရင်းနဲ့ “သားက စိတ်ကို လွှတ်လိုက်တာကိုး။ မိန်းမတွေကို လိုးရင် အဲ့လိုစိတ်ကို မလွှတ်ပစ်လိုက်ဘဲ ကိုယ်ကပြီးမသွားအောင် ထိမ်းထားရ တယ်ကွ။” “သားလည်း ထိမ်းတာဘဲဆရာမရဲ့၊ ဆရာမလုပ်တာက ကောင်းလွန်းတော့ ဘယ်လိုမှ မထိမ်းနိုင်ဘဲ ထွက်သွားတာ၊ ဆရာမ မကောင်း လိုက်ဘူးမို့လား၊ စောရီးနော်ဆရာမ” “ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်၊ သိပ်ပြည့်ပြည့်ဝဝ မကောင်းလိုက်တာပါ၊ ရတယ်သား၊ မင်းကခုမှ စလိုးတာဆိုတော့ဘယ်ထိမ်းနိုင်ဦးမှာ လည်း။
နောက်ဆို ထိမ်းနိုင်သွားမှာပါ အဲဒီတော့မှကောင်းကောင်း ကြာကြာလိုးပေးနော်၊ ကြားလား” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ” ဆရာမက အခန်းအပြင်ကို ကိုယ်တုံးလုံးကြီးထွက်သွားပါတယ်၊ ပြန်ဝင်လာတော့ ဇလုံတလုံးနဲ့ ရေယူလာပြီး တဘက် အသေးလေးနဲ့ ကျနော့တကိုယ်လုံးကို နေရာအနှံ့ ရေဖတ် တိုက်ပေးပါတယ်။ မင်းဒီအတိုင်းပြန်သွားရင် စောက်ရည်အနံ့တွေနဲ့ မင်းအမေ ရိပ်မိသွား လိမ့်မယ်၊ ခုတော့ သန့်သွားပြီ ပြန်လိုက်တော့နော်။ ဆရာမက ပြန်တော့ဆိုမှဘဲ ကျနော့လီးက ပြန်မာစ ပြုလာပြန်ပါတယ်။ ကျနော်က “ဆရာမ နောက်တခါလောက်လုပ်ကြည့်ဦးမယ်လေ” “အမလေး၊ ကိုယ်တော် အချိန်ကိုလည်းကြည့်ဦး၊ ငါးနာရီထိုးတော့မယ်၊ မင်းညီတွေ ညီမတွေ ပြန်လာတော့မယ်ကွ၊ နောက်နေ့မှနော်” ကျနော်လည်းအဲဒီနေ့ကတော့အဲဒီလောက်နဲ့ဘဲ ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ “ဝေဝေမာ” ဇော်ဇော်နဲ့ စလိုးခဲ့ရတဲ့ အဲဒီနေ့ကတော့ ကျမမှာ သူ့လက်နဲ့သာ တချီပြီးခဲ့ရပြီး သူ့လီးနဲ့ကတော့ မပြီးတပြီးနဲ့ဘဲကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တအားလိုး ချင်နေတဲ့ ကိုယ့်တပည့်လေးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုးလိုက်ရလို့ ကျမ တော်တော်ကြီးကိုကျေနပ်ခဲ့ရပါ တယ်။
အဲဒီနေ့က သောကြာနေ့ဆိုတော့ အဲဒီညမှာ ကိုမျိုးကလည်း တချီ ကောင်းကောင်း လိုးပေးပါသေးတယ်။ ကျမမှာ နေ့လယ်က ဇော်ဇော့် ကိုလိုးထားတာကိုပြန်မြင်ရောင်နေပြီး အဲဒီညက ကိုမျိုးလိုးအပြီးမှာ သူ့ကိုပြန်ဆွပေးပြီး အပေါ်က အသားကုန်တက်လိုးခဲ့ပါ သေးတယ်။ ကျမမှာတော့ နေ့ရောညရော ကောင်းကောင်း အလိုးခံလိုက်ရတော့ နောက်နေ့မှာ အိမ်အလုပ်တွေကို မမောနိုင် မပန်းနိုင် သီချင်း တဆိုဆိုနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးလုပ်နေလို့ ကိုမျိုးကတောင် “ဟ၊ ငါ့မိန်းမ ဒီနေ့တယ် ရွှင်နေပါလား၊ ထီတွေဘာတွေပေါက်ရင်လည်း မောင့်ကိုပြောဦးနော် လျှိုမထားနဲ့” လို့ပြောယူရပါတယ်။ ကျမပေါက်တဲ့ထီက သူ့ကိုပြောလို့ဖြစ်တဲ့ထီမှ မဟုတ်တာနော့။ နောက်နေ့တွေက စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုတော့ဇော်ဇော့် ကို စာမသင်ရတဲ့ရက်တွေပါ။ ကျမကတော့ ကိုမျိုးရှိနေလို့ နှစ် ညလုံး အလိုးခံရလို့ အဆင်ပြေနေပေမဲ့ ဇော်ဇော့်မှာတော့ မနေ့ကမှ သောက်ဖူး လိုက်တဲ့ ဆားငံရေကို တအားသောက်ချင်နေပုံပါဘဲ။ စာမသင်ရပေမဲ့ တနေကုန် ကျမတို့အိမ်ကိုဘဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ကျမ ကလေးတွေနဲ့ ကစားလိုက်နဲ့ ကျမဆီက အခွင့်အရေးများရမလားလို့ သူ့ခမျာ ကျိုးစားနေရှာပါတယ်။
ကျမလည်း ကျမကို မစို့မပို့ လုပ်ခဲ့ တဲ့သူ့ကို ဒါဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီအတိုင်းဘဲကြည့်နေလိုက်ပြီး စိတ်ထဲကတော့ကြိတ်ရီနေလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခမျာတော်တော်သနား ဘို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကျမကိုခိုးကြည့်လိုက် ကိုမျိုးကို ခိုးကြည့်လိုက် နဲ့၊ သူ့ကိုနဲနဲသနားသွားတာနဲ့ ကိုမျိုး အိမ်ထဲမှာရှိတုန်း လှစ်ကနဲ နို့ကို တခါ အဖုတ်ကိုတခါ လှန်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလည်းပြလိုက်ရော သူအိမ်ကိုပြေးတော့တာပါဘဲ။ ဂွင်းပြေးထုတာဘဲဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေ နှစ် ရက်လုံး ကျမတပည့်လေးကို ကလိခဲ့ပြီးတော့ သူရောကျမပါစောင့်စားနေခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ကို ရောက်လာ ပါ တော့တယ်။ အဲဒီနေ့ကျောင်းကပြန်လာတာနဲ့ ကျမထမင်းစားလို့တောင်မပြီးသေးဘူး သုတ်ကနဲ သူရောက် လာပါတယ်။ “ဟဲ့ငဇော်၊ ဝီရိရ ကောင်းလိုက်တာ၊ ထမင်းကောစားခဲ့ရဲ့လား” “စားခဲ့ပါတယ် ဆရာမရဲ့” ဇော်ဇော်က ကျမထမင်းစားနေတဲ့ နားမှာလာထိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျမကို နောက်ကနေဖက်ပြီး “ဆရာမရယ်၊ သားမနေ့က တနေ့လုံးနေလို့မရဘူး၊ ဆရာမကိုဘဲ အရမ်းဟိုဟာဖြစ်နေတာ” “ဟဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်နေတာတုံး၊ ရှင်ရှင်းပြောပါဟဲ့”။
“ဆရာမကလည်း၊ ဟိုနေ့ကလို လိုးချင်နေတာကိုပြောတာဗျ” “ဟင်းဟင်းဟင်း..ကောင်လေးက ကြိုက်နေပြီပေါ့လေ၊ ဟုတ်လား” “အင်းပေါ့ဆရာမရဲ့၊ ဆရာမမှာက အန်ကယ်မျိုးရှိသေးတယ်၊ သားမှာက ဘယ်သူမှ မရှိဘူးလေ၊ ဆရာမ အန်ကယ်မျိုးနဲ့လိုးဖြစ်သေးတယ် မို့လား” “အင်းပေါ့၊ ကိုယ့်ယောင်္ကျား စနေတနင်္ဂနွေလေး အားတုန်းလိုးရတာကို” “အန်ကယ်မျိုးလိုးတာကောင်းလားဟင်၊ ဆရာမ” “အင်း၊ ကောင်းတယ်၊” “သားလဲ ဒီနေ့ကောင်းကောင်းလိုးပေးမယ်နော်၊ ဆရာမ” “အေးပါ၊ ကြည့်သေးတာပေါ့၊ ခုတော့ ဆရာမ ထမင်းစားပရစေဦး၊ သွား မင်း စာအုပ်တွေ ထုတ်ထားနှင့်၊ စာသင်တာတော့ရပ်လို့မဖြစ်ဘူး နော်” ဇော်ဇော် စာအုပ်တွေပြင်ဆင်နေတုံး ကျမလည်း ထမင်းစားတာ လက်စသပ်ပြီး နောက်ဖေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဖေးမှာ ကျမ အဖုတ်ကို အဖုတ်ဆေးတဲ့အရည်နဲ့ သေသေချာချာဆေးလိုက်ပါတယ်။ တနေကုန်ကျောင်းမှာ ပင်တီဝတ်ထားပြီး သေးတွေဘာတွေပေါက်ထားတော့ အောင်းပြီး ကျမအဖုတ်ကြီး နံနေမှာစိုးလို့ပါ။ ဒီနေ့ ကျမတပည့်လေးကို သင်ခန်းစာ အသစ်တက်ပေးဘို့လည်းရှိတော့ ကျမအဖုတ်က နံနေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။
ပြီးတော့ စပန့်ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ စွတ်ကျယ်ဂျိုင်းပြတ်ကိုလဲဝတ်ပြီး အိမ်ရှေ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဇော်ဇော်က ကျမကို မြင်တာနဲ့ သူ့စာလုပ်လက်စကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျမလည်းသူ့ကို လက်ဆွဲထူပြီး အခန်းထဲကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခန်းထဲ ရောက် တာနဲ့ ဇော်ဇော်က မနေ့ကသင်ပေးထားသလို ကျမကို စ နမ်းပါတယ်။ ကျမနှုပ်ခမ်းကို တဝကြီးနမ်းပြီတော့ သူက ကျမ အပေါ် စွပ်ကျယ် ကို မ ချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီတော့ ကျမကို မတ်တတ်အတိုင်းထားပြီးသူက ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမနို့နဲ့ သူ့ပါးစပ်တတန်းတည်းဖြစ်သွားပြီး ဇော်ဇော်က ကျမနို့ကို စပြီးစို့ပါတော့တယ်။ သူ့လက်တွေက ကျမခါးကိုသိုင်းဖက် ထားပြီး သူကနို့ကို ဘယ်တလှည့် ညာတလှည့် အသေအချာကိုစို့ပါတော့တယ်။ အရင်ခေါက်က နို့သင်ခန်းစာ လုံးဝမရောက်ခဲ့ပေမဲ့ အခု ကျမ တပည့်က ဆရာထက် တပည့်လက်စောင်းထက်ပြနေပါတယ်။ နို့ကိုတော်တော်ကြာကြာစို့နေတော့ ကျမနို့ အတွင်းထဲကရော ဆီးခုံနား ကပါ ယားကျိကျိဖြစ်လာပြီး ကျမ အဖုတ်ထဲကလည်း အရည်တွေစိမ့်ထွက်လာပါတယ်။
သူက ခနထပ်စို့ပြီး မတ်တတ်ထရပ် လိုက်ပြီး ကျမကို ကုတင်ပေါ် အသာလေးတွန်းပြီးထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူကကုတင်အောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ထိ ဇော်ဇော် အဝတ်အစားလုံးဝမချွတ်သေးပါဘူး။ ကျမကလည်းဘာမှ မပြော ဘာမှမလုပ်ဘဲ သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူ့ကိုလွှတ်ပေး ထားလိုက်ပါတယ်။ ကုတင်အောက်မှာ ထိုင်ပြီးတော့ သူက ကျမ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ခြေကျင်းဝတ်ကနေဆုတ်ကိုင်ပြီး ဆွဲထောင် လိုက်ပါတယ်။ ကျမက နောက်ကိုလန်မကျသွားရအောင်နောက်ဘက်ကို လက်နဲ့ထောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ကျမ ခြေထောက် နှစ်ချောင်း ကို ဖြဲလိုက်ပြီး ကျမအဖုတ်ကို စပြီးနမ်းပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့လျှာနဲ့ကျမအဖုတ်ကို စပြီးယက်ပါတော့တယ်။ ကျမ အစီအစဉ်က သူ့ကို ဒီနေ့ အဖုတ်ယက်တဲ့သင်ခန်းစာတက်ပေးမလို့ဟာကို သူက ကျမထက်ကိုကျော်နေပါတော့တယ်။ ကျမလည်း ပျော်ပျော် ကြီး အယက်ခံရတော့တာပေါ့ရှင်။ “ရှီး…အီး….ရှီး.. ကောင်းတယ် သားလေးရယ်၊ တော်လိုက်တာ…. အား….ယက်…ယက် နာနာလေးယက်ပေး” ဇော်ဇော်က ကျမအဖုတ်ကို။
အပေါ်အောက် စအိုဝကနေ ဆီးခုံထိ ဆွဲဆွဲ ယက်ပေးပြီး ခနနေတော့ ကျမရဲ့စောက်စေ့ကို လျှာနဲ့ ခပ်ပေး ပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမအဖုတ် အတွင်းထဲကို သူ့လျှာကို ထိုးထည့်ပြီးတော့ ကျမကို လျှာနဲ့လိုးပြန်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလိုးတာက ခုန အစေ့ကို ယက်သလောက်မကောင်းလို့ ကျမက သူ့ခေါင်းကို အသာလေး ကျမဘက်ဆွဲလိုက်ပြီး သူ့လျှာကျမ စောက်စေ့နားရောက်တော့ မှ လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း တထွာပြရင် တတောင်မြင်တဲ့ကလေးပါ။ ကျမကြိုက်မှန်းသိတော့ ကျမ စောက်စေ့ကိုနောက်ပိုင်း ပို ဦးစားပေးပြီးယက်ပါတယ်။ အား……..ကလေးရေ… အစေ့ကို ဖိဖိပြီးယက်ပေးစမ်း၊ အင်း… ဟုတ်တယ် အဲဒါမျိုး၊ အား.. ယက်၊ယက်၊ ဖိယက်၊ အား..အား…အား… ကောင်းတယ် ငဇော်ရဲ့အား…..ကောင်းလိုက်တာ..ရှီး…..ကျမမှာ ကောင်းလွန်းလို့ အဖုတ်ထဲက စောက်ရည်တွေက ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲထွက်နေပါတော့တယ်။ဒါကိုကျမတပည့်လေးက မရွံမရှာ ယက်နေတာသူ့မျက်နှာတခုလုံးလည်းကျမစောက်ရည်တွေနဲ့ ရွဲရွဲ စိုနေပါတော့တယ်ရှင် သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး ကျမစောက်ခေါင်းထဲမှာ အရမ်းယားလာပြီး တကိုယ်လုံးကြက်သီးတွေ ဖြင်းကနဲဖြင်းကနဲ ထလာပါတယ်။
အကြောပေါင်းတထောင် စိမ့်နေအောင်ကောင်းတယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဇော်ဇော်က ဒီလောက်နဲ့ မရပ်သေးဘဲ သူ့လက်ညှိုးကို ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်ပါ တယ်။ သူ့လက်ညှိုးကို ပက်လက်လေးထားပြီး ကျမအဖုတ်ကို လက်ညှိုးနဲ့လိုးပါတော့တယ်။ တချိန်ထဲမှာဘဲ သူ့ပါးစပ်က ကျမစောက်စေ့ ကို စုပ်ပေးထားပြီး လျှာကလည်း စောက်စေ့ကို မနားတမ်း ကလိနေပါတယ်။ ခနနေတော့ လက်ညှိုးတချောင်းနေရာမှာ လက်ခလည်ပါ ပေါင်းပြီးနှစ်ချောင်း ဆက်လိုးပါတယ်။ သူ့ လက်တချောင်းနဲ့ နဲနဲလေး အားမရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘဲ နှစ်ချောင်းဝင်လာတော့ ကျမမှာ ကောင်းပြီးရင်းကောင်းနေရပါတော့တယ်။ ကျမတပည့်လေးက ကျမလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျမ မပြောရဘဲနဲ့ကို ဘာလိုတယ်ဆိုတာကို အလိုလိုသိနေသလိုပါဘဲ။ အဲဒီအချိန်ပိုင်းလေးမှာဘဲ ကျမ စောက်ဖုတ် ဟိုး အတွင်းထဲကနေ လှိုင်းလုံးတလုံး တလိမ့်လိမ့် တက်လာ သလိုမျိုး လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ ဖြစ်လာပြီး ကျမအသိထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့ဘဲ ကောင်းလွန်းမက ကောင်းလာပြီးတော့ အား..အား.. ကောင်းတယ်…ကောင်း…. သေပါပြီ… အား…အား…။
ယားလည်းယား ကောင်းလည်းကောင်းလွန်းလို့ ကျမဖင်ကြီးက အပေါ်ကို ဆတ်ကနဲ၊ဆတ်ကနဲ ကြွတက်လာပြီး ကျမတကိုယ်လုံး တုံတက်လာပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို ပြီးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇော်ဇော်က ကျမ အဖုတ်ကို လုံးဝ အလွတ်မပေးသေးဘဲ လက်က လည်း အထဲမှာ ဆက်ကလိနေ ပါးစပ်ကလည်း စောက်စေ့ကို အဆက်မပြတ်ဆက်စုပ်နေလို့ ကျမမှာ သူ့ခေါင်းကို အတင်း တွန်းထုတ်ပြီး ကျမအဖုတ်ကိုလည်းသူ့လက်နဲ့ဝေးရာကို အတင်း ဆွဲခွာလိုက်ရပါတော့တယ်။ လုပ်ပေးနေတာက သူဖြစ်ပေမဲ့ ကျမမှာ မောပြီး အသက်ကိုတောင်မနဲရှိုက်ရှိုက်ပြီးရှူနေရပါတယ်။ သေအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးဘဲဖြစ်မှာပါ။ ကျမဘဝတလျောက်လုံးကိုမျိုး တယောက်တည်းရဲ့အလိုးကိုဘဲခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။ ကိုမျိုးက နည်းမျိုးစုံ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လိုးပေးခဲ့လို့ အရသာမျိုးစုံရခဲ့ဘူး ကောင်းခဲ့ဘူးပေမဲ့ ခိုးစားရလို့လားတော့မသိပါဘူး ဒီနေ့ ရတဲ့အရသာမျိုး ကောင်းတဲ့ကောင်းခြင်းမျိုးကိုတော့ လုံးဝမမီပါဘူး။ “ဇော်ဇော်” ကျနော်က ဆရာမ အမောပြေအောင်ခနစောင့်နေလိုက်ပြီးကျနော့ ဘောင်းဘီနဲ့ တီရှပ်ကို ချွတ်လိုက်ပါတယ်။
ဆရာမ အသက်ရှူနဲနဲ မှန်လာတော့သူ့ခြေထောက်ကိုပြန်ဆွဲယူပြီးသူ့ကိုယ်လုံးကို ကုတင်စောင်းဘက်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း ဘာမှမပြောဘဲ အလိုက်သင့်ပါလာပါတယ်။ ကျနော်က ဟိုတနေ့က ကျခဲ့တဲ့သိက္ခာ ကိုပြန်ဆယ်ရဦးမှာမို့ အစွမ်းကုန်ကျိုးစားနေရတာပါ။ ပြီးတော့ ဆရာမယောင်္ကျားကလည်း ဆရာမကို အလိုးကောင်းတယ်ဆိုတော့ သူ့ထက်မသာရင် ရေရှည်မှာကျနော့အတွက်လွယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုအချိန်မှာ ကျနော့လီးကြီးကလည်း ဆရာမကိုလိုးဖို့ လုံးဝ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး မာတောင်နေပါပြီ။ ကျနော်က ဆရာမပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဘေးကိုဆွဲဖျဲလိုက်ပြီးတော့ စောက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ သူ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို မက်မက်မောမော ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဖေါင်းကား ဖြူဖွေးပြီး ဟတတ လေးဖြစ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်တခုဟာ ဘယ်လောက်မက်မောစရာကောင်းလည်းဆိုတာတော့ ကြုံဘူးမှဘဲ သိနိုင်ပါလိမ့် မယ်။ ကျနော်က ကျနော့လီးကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ဟ တတလေး ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာမရဲ့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် ဖြေးဖြေး လေးပွတ်ဆွဲပေးလိုက်တော့ ဆရာမဟာ ဟင်းကနဲ ဖြစ်သွားပြီး။
သူ့အောက်နှုတ်ခမ်းကို အပေါ်သွားနဲ့ ဖိကိုက်ထားလို့ မျက်လုံး လေး မပွင့်တပွင့်နဲ့ ကျနော့မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ ကျနော့လီးကလည်း ဆရာမရဲ့စောက်ဖုတ်ပေါ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ ပါပြီ။ အပေါ်အောက် ဖိဆွဲပေးနေရင်းက တခါတခါမှာ အဖုတ်ထဲကို ဒစ် တဝက်လောက်ဝင်အောင် ဖိသွင်းသွင်းပေးလိုက် စောက်စေ့ကို လီးထိပ်နဲ့ ဖိပွတ်လိုက်အထဲကိုဒစ်တမြုပ်စာလောက် သွင်းပေးလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဆရာမမှာ အသက်ရှူမြန်လာပြီး “သားရေ၊ ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလည်း၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ ဆရာမကို သေအောင်သတ်နေတာလားဟင်” ဆိုပြီး သူ့တကိုယ်လုံးမြောက်ကြွ မြောက်ကြွ ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ “သားလေး၊ တော်ပါတော့သားလေးရယ်၊ ဆရာမကို ဆက်မနှိပ်ဆက်ပါနဲ့တော့၊ မင်းလီးကြီး တဆုံးထည့်လိုက်ပါတော့နော်၊ ဆရာမ မနေနိုင်တော့ဘူး၊ လုပ်ပါသားရယ်၊ လိုးပါတော့နော်” ကျနော်လည်းဆရာမကတောင်းပန်နေတော့ ကျနော့လီးကြီးကို ဆရာမစောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို ဖြေးဖြေး၊ ဖြေးဖြေးနဲ့ တဆုံးထိထိုးသွင်း လိုက်ပါတော့တယ်။
“အီး….ကောင်းလိုက်တာ….အောင်မလေး.. အမေရေ ကောင်းတယ်အမေရဲ့”။ဆရာမက အဲ့လို သူ့အမေကိုတနေတုံး ကျနော့မှာ ဆရာမအဖုတ်ကို မှန်မှန်ကြီးစ လိုးပါတော့တယ်။ ကျနော်လိုးနေတုံး ဆရာမကလည်း အငြိမ်မနေဘဲ သူ့ခြေထောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ခြေကျင်းဝတ်ကနေလှမ်းဆွဲထားပြီး အောက်ကနေ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ကျနော့လီးကို ကော့ကော့ထိုးနေပါတယ်။ ကျနော့ကအစောင့် သူ့ကအကော့နဲ့ တိုင်မင် မှန်မှန်နဲ့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် စည်းချက်ညီညီ နဲ့ တော်တော် ကြာကြာလိုးပြီးတော့ဆရာမက သူ့ရဲ့ကော့ရှိန်ကို ပိုအရှိန်မြှင့်လိုက်ပြီး အားကိုလည်းပိုတိုးလိုက်ပြီးတအားစောင့်ထိုးလာပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူ့အရှိန်နဲ့လိုက်အောင် အသားကုန်ကိုစောင့်စောင့်လိုးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ “အား….အီး…အမလေး…သေပါပြီ..ကောင်းလိုက်တာ၊ လိုးပါ…လိုးပါ…. စောင့်… အသားကုန်စောင့်… အီး..အီး… လိုးပြစ်၊ စောင့်လိုး.. စောင့်လိုး… အမလေး… အမေရေ… ကောင်းလွန်းလို့ပါ၊ သားရေ လိုး၊ လိုး၊ လိုးပါသားရယ်၊မရပ်လိုက်ပါနဲ့” သူအော်လေ၊ ကျနော်က အားကုန်စောင့်လိုးလေနဲ့ ကျနော်လည်းတော်တော်မောနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့အဖို့ကတော့ ကျနော်သေချင် သေ သွားပါစေ လုံးဝမချန်ဘဲကို အားကုန်လိုးမှာပါ။ကျနော် ကုတင်အောက်ကနေ မတ်တတ်စောင့်နေရတာ ကြာလာတော့ ပုံစံတမျိုး ပြောင်း ပြီး ကျနော့ညာခြေထောက်ကို ဆရာမရဲ့ ဘယ်ခြေထောက်ပေါ်ခွကျော်လိုက်ပြီး အပေါ်စီးကထပ်ပြီး ဖိဖိပြီးစောင့်လိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ကျနော်တို့နှစိယောက်က နဲနဲလေး ဘေးတိုက်ပုံစံဖြစ်သွားပြီး ကပ်ကျေးလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ အခုနက နဲနဲခံနေတဲ့ ဆရာမရဲ့ တင်ပါးက အသားတွေလည်း လွတ်သွားပြီး ဆရာမဆီးခုံနဲ့ ကျနော်ဆီးခုံ သေသေချာချာကိုထိလာပြီး စောင့်ရတာလည်း အရမ်းကို ကောင်း လာပါတယ်။ အသားချင်းရိုက်သံကလည်း အကျယ်ကြီးကိုထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် စလုံး ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကျနော်ကလည်းဆရာမကိုခုလို အကြာကြီးလိုးနိုင်အောင် ခုန ဆရာမ ထမင်းစားနေတုံးက စာကြည့် စားပွဲမှာ ဂွင်းတခါထုထားတော့ ဆရာမကို အကြာကြီးလိုးနိုင်နေပါတယ်။ ဆရာမမှာတော့ အောက်ကနေ နိဗ္ဗါန်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရောက် နေလည်းမသိတော့ပါဘူး။
နှစ်ယောက်သား ချွေးတွေကလည်းရွှဲ မောကလည်းမောနဲ့ တော်တော်လေးကြာလာတော့ ကျနော်လည်း ပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ကျနော့လီးတချောင်းလုံး တင်းလာပြီး သံချောင်းလို တအားမာလာပါတယ်၊ အဲဒီလိုကျနော့လီးက မာလာလေ ဆရာမရဲ့ မျက်လုံးကလည်းပြူးလာပြီးတော့ ကျနော့ကို အောက်က ပိုပြီးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြန်စောင့်ပါတော့တယ်။ အံကို လည်းကြိတ်ထားပြီး ရင်ခေါင်းသံကြီးနဲ့ “အီး…အီး….အီး….အီး…” နဲ့အော်နေပါတော့တယ်။ ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ထိမ်းထားပြီးမထိမ်းနိုင်တော့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တော့မှဘဲ ရှိသမျှ အားတွေ အကုန်သုံးပြီး ဖိစောင့်ချလိုက်ပြီး ကျနော့လရည်တွေကို ဆရာမစောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ တော် တော်ကြာတဲ့အထိ ဒီအတိုင်း လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲကမထုတ်ဘဲဖိသွင်းထားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး တယောက်လီး နဲ့ တယောက်စောက်ဖုတ် အတင်းဆွဲကပ်ထားပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်နေတာဘဲ တော်တော်ကြာပါတယ်။ အဲဒီအရှိန်ငြိမ်သွားတော့မှ။
ကျနော့လီးလည်း ပျော့ခွေသွားပြီး ဆရာမစောက်ဖုတ်ထည်းက ဆွဲမထုတ်ရဘဲ အလိုလို ထွက်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော် လည်း ဆရာမ ဘေးမှာ ပစ်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ဆရာမက ကျနော့ကို ဖက်ထားပြီး “သားလေးရယ်၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းကိုမသိဘူး၊ မင်းက ဆရာမရဲ့ဆရာဖြစ်သွားပြီ သိလား”။“အန်ကယ်မျိုး လိုးတာနဲ့ ဘယ်လိုနေလဲဟင်” “အိုး၊ ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ ဒါကိုမှလိုးတယ်ခေါ်တာ၊ မင်းလိုကောင်းအောင်ဘယ်သူမှလိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိလား” အဲဒီနေ့ကတော့ ကျနော်တို့စာမသင်ဖြစ်ပါဘူး၊ နာရီဝက်လောက်နားပြီတော့ နောက်တချီ၊ ပြီးတော့နာရီဝက်လောက်နားပြီးတော့ နောက်တချီနဲ့ စုစုပေါင်း လေး ချီ လိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့တွေမှာတော့ဆရာမက စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ လိုးစေပါတယ်။ စာမသင်ခင်တချီ၊ ပြီးရင် စာသင်၊ ပြန်ခါနီးတချီ တနေ့ကို နှစ် ချီဘဲ အလိုးခံပါတယ်။ ဆရာမကတော့ စနေတနင်္ဂနွမှာ အန်ကယ်မျိုးကလိုး။
ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာ ကျနော်ကလိုးနဲ့ ကောင်းကောင်းကြီးဇိမ်တွေ့နေပါတော့တယ်။ထူးဆန်းတာက ဆရာမကို လိုးလိုးပြီးစာသင်ရတော့ စာတွေလည်းပိုအရလွယ်ပြီး ညာဏ်လည်းပိုကောင်းလာသလိုပါဘဲ။အဲဒီနှစ်က ဆယ်တန်းကို ကျနော် ဂုဏ်ထူး ငါးဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့ ပါတယ်။ တစ်ဝ တန်းအောင်ပြီးကျနော် ဆေးတက်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆရာမကို အရင်လောက်မလိုးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကျနော်က တနေကုန် ကျောင်းတက်နေရပြီး ပြန်လာတဲ့အခါ ဆရာမတို့အိမ်မှာ မိသားစုကစုံနေပါပြီ။ ကျနော့မှာလည်း ကျောင်းမှာ စော်တပွေရပြီး သူ့ကို ဝါးနေရတော့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ ကျနော့ လက်ဦးဆရာမကိုတော့ ကျနော့ကျောင်း ပိတ်တဲ့၇က်တချို့မှာတော့ ရံဖန်ရံခါလောက်ဘဲ လိုးဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီသင်ခန်းစာတွေ ပထမဦးဆုံးသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျနော့ ဆရာမ ဒေါ်ဝေဝေမာရဲ့ ကျေးဇူးကိုတော့ တသက်လုံး တ သသ သတိရနေမိပါတော့တယ်…..ပြီးပါပြီ။